Renirano sy lalandriaka ao Jamaika, mijaly noho ny fanararaotana · Global Voices teny Malagasy
Matetika ampiasaina ho fanariam-pako, misedra olana ireo renirano ao Jamaika
Voadika ny 08 Oktobra 2021 4:55 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Septambra 2021)
Dry River Falls, Jamaika. Sary an'i Josh Hunter ao amin'ny Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
Tao amin'ny bilaogin'i Petchary no nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity. Dika nokiraina no mivoaka etsy ambany, miaraka amin'ny fanomezandàlana am-pitiavana avy amin'ny mpanoratra.
Ny Andro Erantany ho an'ny Renirano, ankalazaina isantaona rehefa Alahady fahefatra amin'ny volana Septambra ary noforonin'ilay mpiaro renirano efa hatry ny elabe, Mark Angelo, dia miezaka ny manaitra ny sain'ny maro momba ny lanjan'ny renirano, ary mandrisika ny hisian'ny fitantanana tsaratsara kokoa ny renirano rehetra.
Ao Jamaika, zavaboary manaraka ny toetrandro ny renirano—mety hanjavona am-bolana maro ny sasany noho ny haintany, na hivadika ho riaka tsy voafehy mandritra ireo oram-batravatra amin'ny fihoarany ny morona ka miteraka tondradrano. Ny renirano sasany, indrindra fa ireo manakaiky honahona misy honko, dia toa mijanona toy izay nisy azy ihany, indraindray matroka sy miadam-pandeha, indraindray mangatsakatsaka.
Tsy lohahevitra mahafinaritra ho an'i Jamaika ny lohahevitra “ireo sakelidrano an-tanandehibe” ho an'ny Andro Erantany ho any Renirano tamin'ity taona ity. Ao Kingston, Montego Bay, ary ireo tanàna madinika maro any amorotsiraka, lasa maka endrika lalandriaka ireo sakelidrano. Mazàna ravahan'ny fako, lasa toerana ratsy tarehy mety hiafenan'izao rehetra izao – hatramin'ny olona aza – izy ireny. Topimaso malaky fotsiny no ataon'ireo mponina amin'izy ireny rehefa manitsaka azy, fa avy eo ahodiny ny masony.
Tamin'ny 2016, ny Jamaica Environment Trust (JET) dia namoaka tatitra iray nitondra ny lohateny hoe “Ny Fako sy ny Lalandriaka,” nifantoka manokana tamin'ny fahalotoana goavana zakain'ny Lalandriaka Atsimo (South Gully) ao Montego Bay. Torohevitr'izy ireo ny hanaovana lisitran'ireo asa tokony hatao, isan'ireny ny fanadiovana tsy tapaka sy ny fanangonana ireo fako, ny fanabeazana ny rehetra ikendrena ireo vondron'ny mpandraharaha eo an-toerana sy ny fampiharana ny lalàna efa misy momba ny tontolo iainana.
Ny JET koa dia nifanome tànana tamin'ny Tourism Enhancement Fund, Montego Bay Marine Park sy ny Yaadie Environmental Conservationists mba handrafitra endrika, hanorina ary hanandrana tohodrano mitsingevana hanakanana ireo poti-javatra eo amin'ny vavaranon'ny South Gully ho ampahany amin'ilay tetikasam-pirenena “Morontsiraka Madio 2014/15″. Isaky ny voadio izy io, manodidina ny 50–100 pounds (23-46 kilao) ny fako esorina eo – harona sy tavoahangy plastika no ankamaroany. Na izany aza, nisy ny fanamby natrehana tamin'ny fitantanana sy ny fikarakarana azy, ary dia lasa asa be sy mandany vola be ny fanohizana azy.
Fanadihadiana iray tamin'ny 2010 no naminavina fa manakaiky ny 25–30 isanjato amin'ireo fakon'i Jamaika no tsy voahodina araka ny tokony ho izy, mazàna no miafara any amin'ireo lalandriaka, tatatra ary renirano, izay milatsaka any an-dranomasina. Tsy latsaky ny 16 ireo lalandriaka mivarina ao amin'ny seranan'i Kingston. Aorian'ireo orambe mivatravatra, tavoahangy plastika an-jatony no mitsingevana eny anaty rano, voafaoka miaraka amin'ireo poti-javatra hafa – isan'ireny ny harona feno tain'olona- avy any amin'ireo lalandriaka mankao amin'ilay seranana efa ela niaretana.
Ny Ministeran'ny Fitantanana Anatiny no tomponandraikitra amin'ny fikarakaràna sy fanadiovana ireo lalandriaka. Tamin'ny Martsa, ny Minisitry ny Fitantanambola, Nigel Clarke, dia nanambara ny fisian'ny tetikasa iray mitentina 320 tapitrisa dolara Jamaikàna (2,164,650 dolara amerikàna) ho fanadiovana ireo lalandriaka ao Kingston, nantsoina hoe “Gully Intervention Programme.” Mety ho tafiditra ao anatin'izany, ankoatra ny zavatra hafa, ny fanofanana ireo mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina ho toy ny mpiambina ny tontolo iainana, saingy nahemotra ilay hetsika noho ny olana ara-bola nateraky ny valanaretina COVID-19. Mitovitovy amin'izany ihany, tao anatin'ny antsafa iray ho an'ny fahitalavitra, nanamarika ny tale mpanatanteraky ny National Solid Waste Management Authority (NSWMA), Audley Gordon, fa tsy ho ato ho ato mihitsy ireo fiarabe vaovao 100 natao ho fandraofana fako no ho tonga, satria tsy misy vola ho azy ireo aloha izao.
Mitaingina volontsangana narafitra ao amin'ny renirano Rio Grande, andrefan'ny seranana Antonio, Jamaika. Sary an'i Kent MacElwee ao amin'ny Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
Mandritra izany fotoana izany, efa an-taona maro izao no miaina anaty tahotra ireo mponina ao Harbour Heights, ao Harbour View hatrany amin'ny atsimo-andrefan'i Kingston, noho ny tranon-dry zareo mihilangilana eny amoron'ny lalandriaka iray izay mihitsaka tsikelikely ireo ampehintany aminy. Toa tsy misy na iray aza te-handray ny andraikiny, na eo aza ireo resadresaka ifanaovana amin'ny media sy ny adisisika henjana ataon'ireo mponina. Tany am-piandohan'ity taona ity, nisy vola nampanantenaina ary ny China Harbour Engineering Corporation (CHEC) no tokony nanao ny asa fanamboarana ireo ampehintany vaky amin'ilay lalandriaka, ampahany amin'ilay tetikasa Lalambe Migodana amin'ny Morontsiraka Atsimo.
Ivelan'ireo faritra an-tanandehibe, misedra olana ihany koa ireo renirano ao Jamaika, ary tsy hoe fotsiny noho izy ireny mazàna ampiasaina ho fanariana fako, tahaka ireo lalandriaka. Ampiasaina sy atao tsinontsinona ireo renirano—isan'izany ny Rio Cobre— noho ny fandotoan'ny indostria. Tranga iray vao haingana ilay niteraka fahafatesana trondro marobe, tsy nahafahan'ireo mponina nahita sakafo, fidirambola, rano fisotro, ankoatra ny fiantraikany tamin'ny fahasalaman-dry zareo. Voaloton'ireo akora simika loatra ny rano ka nanery ny Kaomisiôna Nasiônaly momba ny Rano nanakatona ny orinasany nandritra ny andro maro. Ny National Environment and Planning Agency (NEPA) – masoivoho misahana ny tontolo iainana sy ny fandrindràna – dia maminavina ihany koa ny hitory eny amin'ny fitsaràna an'ilay orinasa mitrandraka bauxite voarohirohy tamin'ilay tranga, satria tsy voalohany no nisy ny zavatra tahàka izao. Ny Oktôbra izao no voalahatra fa tokony hisy ny fihainoana.
Ankoatra ny fahalotoana anefa dia misedra olana hafa ihany koa ireo renirano jamaikàna. Mandavaka lalina ny tontolo ao an-toerana ny fiovaovàn'ny toetrandro, vao mainka manamafy izany ireo fihetsika manimba tontolo iainana ataon'ny olombelona izay matetika no tsy misy fanarahamaso tsara sy tsy voarindra, ka ireo olona izay tena marefo ara-toekarena no mizaka ny fiantraikan'izany amin'ny ankapobeny.
Jereo ny Bull Bay, vondrompiarahamonina iray tsy dia manana fidirambola any amin'ny manodidina an'i Kingston. Tanaty lahatsoratra iray vao haingana tao amin'ny Jamaica Gleaner, nofaritan'ny Tale Jeneralin'ny JET, Theresa Rodriguez-Moodie, ho “faritra atao sorona” ilay toerana. Nitombo be tato anatin'ny taona maromaro ny fitrandrahana gypse ataon'ny Caribbean Cement Company any amin'ireo havoana ao ambonin'ireo vondrompiarahamonina Nine, Ten sy Eleven Miles, mamotika manontolo ny tehezan-tendrombohitra. Efa nampiaka-peo ireo mpikambana avy amin'ireo vondrompiarahamonina, im-betsaka niresaka momba ny fitarainan-dry zareo, satria fantatr'izy ireo fa ny tontolo izay ipetrahany dia faran'izay marefo sy tsy marin-toerana—indrindra fa miaraka amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Iainan-dry zareo ny tahotra ny tafiotra, na ireo oram-batravatra, izay miteraka filatsahana fotaka, fasika sy vato aman-taonina avy any amin'ireo havoana. Nandritra ireo oram-batravatra vao haingana nentin'ireo rivodoza trôpikaly, tsikaritra nifofotra mafy ireo mponina nanaisotra ny poti-javatra tao anaty renirano mba tsy hihoarany sy tsy hahatondraka ny tranon-dry zareo.
Horohoro iray hafa mananontanona ho an'ireo renirano ao an-toerana ny fakàna fasika, na ny ara-dalàna, na ny tsy ara-dalàna. Namotika ny tontolo sy ny rohivoary tao Jamaika ireo indostria isankarazany mpitrandraka ambanin'ny tany. Ny vondrompiarahamonina tantsaha ao Parnassus any Clarendon, ohatra, dia tandindonin'ny firotsahana tany goavana be sy fikororosian'ireo tany sarobidy natao hambolena. Ny fakàna fasika ao amin'ny Rio Minho dia nanaova ny làlana voajanahary nizoran'ilay renirano. Nilaza ilay orinasa voarohirohy amin'izany fa nahazo fanomezandàlana tsara mihitsy izy, nampiany hoe efa tapitra ny fasika ao Rio Minho. Mitohy midangana be hatrany ny filàna fasika ho an'ny indostrian'ny fanorenana izay tsy mitsahatra miroborobo ao amin'ny firenena, ka dia voatery ilay orinasa “niroso amin'ny fitrandrahana ambanin'ny tany.”
Raha ny momba an'i Rio Grande tsy manam-paharoa ao Portland indray, izay nasandratra be ho fisarihana mpizahatany, herintaona lasa izay dia namoahan'ny NEPA naoty fampitandremana ilay orinasa Agro Expo, izay nivaona tamin'ny fanomezandàlana nomena azy. Efa an-taona maro no nisy ny fitrandrahana fasika tao amin'ity renirano tsara tarehy ity.
Fiainan'ny bibidia ao amin'ny Black River, Jamaika. Sary an'i Jan Hazevoet ao amin'ny Flickr, CC BY 2.0.
Anivon'io fanimbàna io, tian-dry zareo Jamaikàna ny reniranony. Toerana fialàna sasatra sy fakàna hatsiatsiaka izy ireny. Ankafizin-dry zareo ireo riandrano mitokantokana ao Cane River sy Gordon Town. Ankamamian-dry zareo ilay Old Spanish Bridge tsara tarehy / marevaka ao St. Mary, izay toerana fanaovana fitsangantsangànana sy fety maro. Tian-dry zareo ny mihaninkanika an'ireo vatobe ao Wag Water, ao Castleton Botanical Gardens, toerana iray malaza falehan'ny olona manao pique-nique, ary tian'izy ireo koa aza hatramin'ireo renirano tsy fantany mialoha, toy ny Black River, ilay lakandrano lava sy malalaka indrindra ao amin'ny nosy, azo ivezivezena, miaraka amin'ny ala honkony matevina, ireo voay sy vorona eny amin'ny honahonany.
Na tsy hamaha eo noho eo ny olana rehetra amin'izao fotoana izao atrehan'ireo renirano ao amin'ny firenena aza ny andro iray natokana ho an'ny renirano, dia afaka hanaitra ireo Jamaikàna hanaja sy hankafia azy ireny misimisy kokoa sy hanara-maso ireo lakandrano mba hijerena ny mariky ny fahasalamana—na ny fanararaotana.
25 Septambra 2021Trinite sy Tobago